Mbido AKOTKỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ AKW FOKWỌ Ndị egwuregwu bọọlụ German Jamal Musiala Childhoodmụaka Akụkọ Gbasara Eziokwu Ndị Na-adịghị Eke
Akụkọ ndụ Jamal Musiala anyị na-agwa gị eziokwu gbasara akụkọ nwata ya, ndụ nwata, nne na nna, ezinụlọ, ụmụnne ya (Latisha, Jerrell) na okpukperechi.
Nke ka nke, Jamal Musiala Nationality, enyi nwanyị ya/Nwunye ya ga-abụ, ụdị ndụ, ndụ nkeonwe na Net Worth (2021 stats).
Na nkenke, Lifebogger na-egosipụta akụkọ ndụ ndụ nke ọkara bekee, ọkara German, ọkara Polish Football Jewel.
Ụdị akụkọ Jamal Musiala anyị malitere site n'oge ọ bụ nwata na Germany. Anyị wee gaa n'ihu mgbe ọ ghọrọ onye ama ama na ma Chelsea, FC Bayern Munich na agba mba German.
Ugbu a, iji mee ka akụkọ ndụ gị nwee agụụ maka ụdị mmekọ nke Jamal Musiala's Bio, lee ndụ nwata ya na ihe ngosi ịrị elu. Ị ga-ekwenye na m, na foto ndị a nke akụkọ ihe mere eme ya na-achịkọta njem football ya.
Jamal Musiala Biography - Lee mmalite ndụ ya na Successga nke Ọma Akụkọ.
Ee, onye ọ bụla maara na Bayern ọla bụ kpakpando nke ọdịnihu. Nke na-adọrọ mmasị karị, anyị hụrụ na ọ na-egwuri egwu Dele Alli (mgbe nwoke England kacha mma). Ọ na-etu ọnụ maka iwere agba dị ike.
N'agbanyeghị otuto ahụ, Lifebogger ghọtara na ọ bụ naanị mmadụ ole na ole gbariela akụkọ ndụ Jamal Musiala zuru ezu.
Ndị otu anyị ewepụtala oge iji kwado Memoir ya - n'ihi ịhụnanya anyị nwere maka bọọlụ. Ugbu a na-enweghị n'ihu, ka anyị malite.
Jamal Musiala Storymụaka Akụkọ:
Maka ndị na-ebido Biography, ọ na-eburu aha nickname - "Bambi" na "onye na-arụ ọrụ". A mụrụ Jamal Musiala na 26th nke February 2003 nne ya, Carolin Musiala na nna, Daniel Richard, na Stuttgart, Germany.
The Soccer Super Talent bịara ụwa dị ka nwa mbụ, n'ime ụmụaka atọ (ya onwe ya, nwanne nwanyị na nwanne nwoke) amụrụ site na njikọ dị n'etiti nne na nna ya anyị nwere ebe a.
Cheta, nwa ikpeazụ nke Family Musiala anọghị na foto a n'ihi na a mụghị ya (Jerrell) n'oge ahụ.
Zute ndị nne na nna Jamal Musiala - Mama ya, Carolin Musiala na papa m, Daniel Richard. Ọzọkwa, nwanne ya nwanyị nke obere, Latisha.
Ndụ mmalite na ntolite:
Jamal Musiala nọrọ n'oge nwata ya na Stuttgart, ebe amụrụ ya. Ya na ụmụnne ya ndị tọrọ tọrọ.
Nwanne nwanne Jamal Musiala bụ Latisha Musiala, ebe aha nwanne ya nwoke bụ Jerrell Musiala. Ndị mụrụ ya - n'oge ọ dị afọ abụọ - kpebiri ịhapụ Stuttgart iji biri na Fulda, obodo ọzọ na Germany.
Ezinụlọ ahụ kpebiri ịga njem (ihe dị ka kilomita 255) ka Carolin Musiala (Jamal's Mum) ga-agbaso nrọ ya.
Carolin Musiala na Daniel Richard hapụrụ Stuttgart gaa Fulda n'oge obere Jamal dị abụọ.
Mgbe ọ nọ na etiti obodo German nke Fulda, Jamal Musiala nwere mmasị mbụ ya na football. Ọ chọkwara ịbụ ọkachamara n'ịgba bọọlụ.
Akụkọ nwata Jekọb Ramsey gbakwunyere Eziokwu akụkọ ndụ na-enweghị atụ
Mgbe ọ dị afọ asaa, nne na nna ya (Carolin na Daniel Richard) kpebiri ịhapụ Germany gaa England. Southampton, obodo ọdụ ụgbọ mmiri dị na ndịda ụsọ oké osimiri England, bụ ebe nwata ahụ nọrọ ihe ka ukwuu n'oge ọ bụ nwata.
N'oge ahụ ndị nne na nna Jamal Musiala (Carolin na Daniel Richard) si Fulda kwaga n'akụkụ ndịda UK, nwa ha amaghị ka esi asụ Bekee.
Nwatakịrị ahụ aghaghị ịmụta okwu Bekee ndị bụ́ isi dị ka ihe dị mkpa iji ghọta ihe ndị mmadụ na-agwa ya.
Jamal, n'oge oge mbụ ya na London, chetara na ndị bekee nwere ezigbo ọyị. N'ajụjụ ọnụ nke Atlantic (ebe nrụọrụ weebụ na-ede egwuregwu na ịdenye aha na ndenye aha), ndị na-agba ọsọ kwuru otu oge;
Na mbido, naanị ihe m na-agwa ibe m bụ uche m.
Enwere m ike ịtụgharị asụsụ Bekee site na omume na-agba ume nke ndị mmadụ, omume, omume obiọma ma ọ bụ mgbe ndị mmadụ mụmụrụ ọnụ ọchị.
N'agbanyeghị na ọ nọ na gburugburu ebe a na-amaghị ama, Jamal jidere nrọ ya. Ihe kachasị amasị ya mgbe ọ bụ nwata ghọrọ ọkachamara n'ịgba ọsọ, chọta onwe ya na European Championship ma, n'ezie, merie iko ụwa.
Jamal Musiala Ezigbo Ezinụlọ:
Nke mbu, ọ bụ ọkara-Bekee, ọkara German. Nke a pụtara na ndị ịgba ọsọ sitere na agbụrụ agbụrụ.
You maara?… Otu n'ime ndị nne na nna Jamal Musiala (papa ya - Daniel Richard) bụ onye Britain-Naijiria mgbe mama ya (Carolin) bụ nwa amaala German.
N'ihi mgbọrọgwụ ezinụlọ ya, ị nwere ike ịza Jamal Musiala ụzọ anọ. Nke mbụ, ị nwere ike ịkpọ ya German-Nigerian. Nke abuo, ị nwere ike ịsị na ọ bụ onye na - agba bọọlụ German-Britain.
Nke atọ, ị nwere ike na-ezo aka na ya dị ka ọkara-English, ọkara-German na ọkara-Nigerian. N'ikpeazụ, ọ bụ ọkara Naijiria, ọkara German, ọkara British na ọkara Polish.
Anyị ga-akọwara/ kwadokwuo gbasara usoro ọmụmụ ya (site na nne na nna ya ochie) na ngalaba mmalite ezinụlọ nke akụkọ ndụ anyị.
Nakwa ịmara, Jamal Musiala sitere na ezinụlọ nwere ezigbo ịhụnanya maka agụmakwụkwọ - (site na nne ya) na football (site na papa ya).
Eleghi anya ị maghị, ọchịchọ Carolin Musiala ịmụ akwụkwọ na mba ọzọ (England) ghọrọ ihe mere ezinụlọ ji kwaga Germany si England.
Ị maara?… Nne Jamal Musiala (Carolin) bụ ọkà mmụta mmekọrịta ọha na eze nke nwere akara mmụta na Mahadum Southampton, England.
Ọ malitere agụmakwụkwọ ya na Fulda tupu ọ gaa nweta akara ugo mmụta bachelor na sayensị mmekọrịta ọha na eze na London.
Mgbe Carolin gụchara BSc, ọ gara n'ihu nweta akara ugo mmụta Masters na Mahadum Goethe Frankfurt.
Ụlọ ọrụ ahụ nyere ya ohere isonye na mmemme mgbanwe Erasmus na Mahadum Southampton.
Mario Gotze Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
Mgbe mmemme ahụ gasịrị, nne nke ụmụ atọ nwetara ọrụ na London. Nke a bụ isi ihe kpatara ezinụlọ ya dum biri na England.
Jamal Musiala Ezinụlọ:
Obi abụọ adịghị ya, Super Talent bụ onye Stuttgart. Ebe ọmụmụ Jamal (Stuttgart) bụ ebe obibi nke Mercedes-Benz na otu n'ime obodo mepere emepe na Germany.
Ọ bụrụ na ị maghị, ndị nne na nna nke ndị egwuregwu bọọlụ German Timo Werner si n'obodo a
Ugbu a, isi ihe na-abịa. Nsonaazụ sitere na nyocha anyị iji chọpụta mgbọrọgwụ ezinụlọ Jamal Musiala na-ekpughe nkọwa ụfọdụ na-atọ ụtọ gbasara usoro ọmụmụ ya.
Na-amalite, ọ ga-amasị gị ịmara na nne Jamal Musiala, Carolin nwere mgbọrọgwụ Polish. Nke a, site na itinye aka, pụtara na nne na nna nne ji bọọlụ sitere na Polish.
N'aka nke ọzọ, nna ya, Daniel Richard (nke a na-akpọ Rich), bụ onye Nigeria site na amụrụ ya. N'ihi njem ya gaa Europe, ọ nwetara ma ụmụ amaala German ma nke Britain.
Anyị wepụtara oge iji kwadebe ebe a na-ese foto. Ọ na-akọwa mbido Jamal Musiala na mba anọ (Germany, Poland, England na Nigeria) - ha niile metụtara aha ya.
Akụkọ nwata Fabio Carvalho gbakwunyere eziokwu akụkọ ndụ na-enweghị atụ
Gallerylọ ihe nkiri a na-akọwa Jamal Musiala Ezinaụlọ na agbụrụ ya.
Jamal Musiala Mmụta:
Nwa afọ Stuttgart bụ ngwaahịa nke ụlọ akwụkwọ Whitgift, ụlọ akwụkwọ ụbọchị nwere onwe ya nwere oke nbanye na South Croydon, London.
Nke a bụ ebe Emile smith rowe tolitere. Jamal malitere agụmakwụkwọ ya n'ebe ahụ mgbe ọ malitere igosi ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ Chelsea.
Otu n'ime ihe ịga nke ọma Jamal Musiala bụ agụmakwụkwọ ọ natara na 11 afọ site na Elite Whitgift School na South Croydon. Thelọ akwụkwọ nkeonwe nwere mmekọrịta na Chelsea FC Academy.
Mgbe Jamal na-agụ akwụkwọ na Whitgift School, ọ mụtara ụkpụrụ ndị Britain, nke nyere ya aka nke ọma ịkọwa asụsụ Bekee.
Ọzọkwa, mgbe ọ na-aga akwụkwọ, nwatakịrị ahụ nwere ọtụtụ ọrụ n'etiti ịgụ akwụkwọ ya na egwuregwu. Mkpebi a sitere n'aka nwata nwere ọgụgụ isi, ọ kpụkwara ọdịnihu ya.
Ọzọkwa Corpus Christi Onye gụsịrị akwụkwọ:
N'ịkwado ọrụ ịgba chaa chaa ya n'oge mbụ, nne na nna Jamal Musiala gbanwere ụlọ akwụkwọ ya. Nnyocha nwere ya na ọ gara ụlọ akwụkwọ Primary School Corpus Christi nke dị na Chestnut Grove, na mpaghara London nke New Malden.
Ga ụlọ akwụkwọ praịmarị na Corpus Christi, Jamal sonyeere otu egwuregwu chess. Nnyocha nwere ya na ọ gakwara ọmụmụ na Hapkido, ngwakọ mara mma nke Korea nke na-akụzi ịgbachitere onwe ya.
N'okpuru ebe a bụ vidiyo nke Jamal na-eme Judo n'ehihie mara mma - n'oge ọ naghị etinye aka na bọlbụ ma ọ bụ na-agụ akwụkwọ ya.
Ma eleghị anya, ị malitela ịmara ihe kpatara Jamal Musiala ji nwee ọgụgụ isi na pitch. Ọfọn, ọ bụ naanị n'ihi na ọ na-akpọ chess n'oge ọ bụ nwata.
Egwuregwu ahụ kụziiri ya iche echiche nke ọma. Ọzọkwa, mgbe ọ nọ na Corpus Christi, ọ meriri asọmpi uri kwa afọ na nnukwu akwụkwọ aha ya bụ "Oge".
Hapkido, ngwakọ mara mma nke Korea, n'aka nke ọzọ, nyeere Jamal aka ịkpa ike. N'akụkụ ndị na-esonụ nke Bio ya, anyị ga-akwatu nkọwa gbasara agụmakwụkwọ ya dịka ọ gbasara ọrụ ya.
Jamal Musiala Football Akụkọ:
N'ịbụ onye bi na Fulda mgbe ọ dị afọ abụọ, ndị mụrụ ya malitere nnukwu nkwadebe maka ọdịnihu ya. Nke a gụnyere ịgagharị iji chọta ya agụmakwụkwọ.
Naanị njem nkeji asaa, site na ụlọ ezinụlọ ha, ha hụrụ ndị otu egwuregwu Lehnerz, ụlọ akwụkwọ egwuregwu bọọlụ ebe papa (Ọgaranya) debara aha Jamaal. N'ebe ahụ, nwatakịrị Whiz malitere ịtọ ntọala ọrụ ya.
Mgbe ọ dị afọ anọ, Jamal Musiala malitere ịgba bọl na mgbada nke obere ndị otu German (TSV Lehnerz) na Fulda n'okpuru nlekọta nke Hoffmann - onye nchịkwa mbụ ya.
Onye nchịkwa a ka nwere ncheta doro anya nke nzukọ mbụ ya na nwata nwere. O kwuru otu oge;
"N'oge ọzụzụ ime ụlọ, Jamal nke dị nanị afọ anọ mere mmemme niile - na-enweghị atụ ụjọ,"
Jamal abụghị naanị na ọ na-emega ahụ. Ọ mara mma nke ukwuu na dribbling ya. Nwa ahụ dị nkọ ahapụghị bọl. Ọzọkwa, ndị ọ bụla na-ekiri ya hụrụ ya n'anya.
N'oge mbụ ya na agụmakwụkwọ, Jamal Musiala mebiri akara 100-akara ndekọ nke onye ọ bụla erubeghị - n'akụkọ ihe mere eme TSV Lehnerz.
Ndị otu ọgbọ ya na-agbagha asọmpi bọọlụ Jamal. N'ihi nke a, Hoffmann kpebiri ịhapụ ya ka ya na ụmụ nwoke toro eto na-asọ mpi.
Ndi Rising Star bu ụzọ gwa ndị mụrụ ya ma ha abụọ nwere mmasị na ya. Nke ahụ hụrụ ọmụmụ nke ihe ịma aka ọhụrụ. N'agbanyeghị nke ahụ. Jamal ka putara n'agbanyeghi umu nwoke toro ogologo na ndi okenye,
Nke a bụ Whiz Kid (Jamaal) na-emeso ysmụ nwoke ndị okenye karịa afọ ndụ ya.
The Early Double Honor:
N'ihi obi ike nwata ya, Jamal Musiala duuru ndị otu ya n'okpuru-7 Fulda TSV Lehnerz iji merie nnukwu nsọpụrụ. Anyị nwere otu ihe akaebe nke foto gbasara mmeri ya n'oge ọrụ ya.
N'oge ahụ, mgbe oge gara nke ọma, onye nchịkwa Jamal ga-eme omume mbụ nke ịkpọkọta ụmụ nwoke niile (nke na-agakarị na 11) maka otu foto.
Ná ngwụsị nke oge foto a, anyị ghọtara - na otu n'ime ụmụ okoro (Jamal), onye nọ n'akụkụ aka nri nke ahịrị ihu, chịrị ọchị.
N'ezie, ọ dịghị otu n'ime ndị otu ya gbarụrụ ihu dị ka ya. Ọ bụrụ na i lee anya nke ọma, ị ga-ahụ ihe kpatara ọchị a.
Jamal Musiala TSV Lehnerz Nkwanye ugwu. Anyị na-amata ọdịiche dị n'etiti ya na ndị otu ya site na ọnụ ọchị ya na mgbakwunye buut ọla edo.
Nwa nwoke ọ bụla ji mpako na-egosipụta ihe osise ọlaọcha ha na akara ọla edo ha. Naanị Jamal nwere nsọpụrụ atọ - ọkpụkpọ ọla edo, ihe osise ọlaọcha na ọla edo. Ya ọlaedo-ọlaọcha buut nwere "TSV Lehnerz G-Juniors 2008-09 Top Scorer."
Honorsọpụrụ ndị ọzọ (ọla edo-ọla ọcha) Jamal jidere n'aka nri ya bụ onyinye - maka ị nweta ihe mgbaru ọsọ kachasị (n'etiti ise ise na 10 maka egwuregwu ọ bụla) na asọmpi G-Juniors.
Onye nkuzi mbu nke TSV Lehnerz nyere otuto. Nkwanye ugwu ahụ karịrị ngosipụta ma ọ bụ ihe na-egosi na Jamal Musiala ga-aga ebe.
Andre Ayew Child Story gbakwunyere Eziokwu akụkọ ndụ na-adịghị agwụ agwụ
Ihe nrite ndị o nwetara na TSV Lehnerz ka bi n'ụlọ ezinaụlọ ya na Munch. N'iche echiche banyere ya, anyị na-enweta mmetụta na-enweghị atụ nke oge enweghị nchefu na oge a na-agaghị echefu echefu nke mmalite ya dị umeala n'obi.
Mmalite Ndụ na England:
N’oge na-adịghị anya, ezinụlọ Jamal Musiala hapụrụ Germany gaa England nke dị na ndịda ụsọ oké osimiri nke Southampton. Nke ahụ gosipụtara akụkụ nke abụọ nke ndụ nwata ahụ, nke gosipụtara mkpebi maka njem football ya.
Maka nne na nna Jamal Musiala, ọ dị mkpa ka nwa ha gaa n'ihu site na ebe ọ kwụsịrị - na Germany. N'ime otu izu nke ibi n'ụsọ oké osimiri ndịda England, Carolin na Daniel Richard kwetara n'echiche nke ịchọta ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ maka Jamal.
Getbanye na otu n'ime ụlọ akwụkwọ London kachasị mma (dịka Arsenal, Chelsea, Tottenham wdg) adịghị mfe dịka ha tụrụ anya ya. Ka oge na-aga (na-enweghị football), Jamal nwere nkụda mmụọ na nri.
Enweghị ike ịchọta ụlọ akwụkwọ football mere nna ya, Daniel Richard, tụlee echiche nke ịmanye ihe.
Nke ahụ bụ ụdị onye ya (ụdị pushy). N'ịchọ ịmepụta ohere, nna nke atọ malitere ịkpọ oku ekwentị.
Nkwuwa Okwu nke Papa
Ka izu na-agafe na-enweghị football maka nwa ya nwoke, Daniel Richard (nna Jamal Musiala) kpebiri iwere ehi ahụ site na mpi.
Na-enweghị oge ọbịbịa ma na-enwe ihe ịga nke ọma n'uche, ọ kpọọrọ nwa ya nwoke gaa na ebe nnukwu ụlọ akwụkwọ football na England n'ụsọ oké osimiri ndịda.
Kpọmkwem n'ihe dị ka Ọktọba 2010, ezinụlọ ahụ kwụsịrị ụgbọala ha kpọmkwem n'ihu ụlọ ọrụ Southampton Foundation. Nna Jamal Musiala, Daniel Richard, jidere nwa ya nwoke n’aka wee banye n’ụlọ ahụ.
Ozugbo ahụ, ya na Jamal nọdụrụ n'ụlọ nchere ka ọ na-achọpụta ihe na-esote ya. Mgbe Musialas na-eche echiche, ọ nwere ihu ọma izute onye ọbịbịa nwere enyi aha ya bụ Jazz Bhatti.
Onye nyemaka Chineke onye nyere Daniel Richard ndụmọdụ:
Nke a bụ Jazz Bhatti, nwoke gosipụtara Jamal Musiala Family ụzọ.
Jazz Bhatti gwara Daniel Richard na nwa ya nwoke kwesịrị ibu ụzọ banye ụlọ akwụkwọ bọl mgbe ha na-agbanye maka nnukwu - gụnyere agụmakwụkwọ Southampton.
Nwoke a, bụ Bhatti, na-arụ ọrụ n'ụlọ ọrụ ndị senti (ebe nna Jamal Musiala bịara chọta ohere maka nwa ya nwoke). Jazz Bhatti nọkwa na azụmaahịa ịgba bọọlụ - dịka ụlọ akwụkwọ bọọlụ nke ya nwere njikọ chiri anya na ndị nsọ.
Bhatti nwere azụmaahịa a maara dị ka agụmakwụkwọ obodo Central. Nke a bụ ụlọ akwụkwọ bọọlụ dị na okpuru Southampton ebe ụmụaka ọkachasị sitere na ndị enweghị enyemaka na ndị ezinụlọ kwabatara nwere ohere ịgba bọọlụ.
Jazz Bhatti kpọrọ ndị ezinụlọ Musiala ka ha lelee ntọala ya. O mere ka ndị na-agụ agụụ na-agụ agụụ (Jamal) sonye n'akụkụ U7s, nke nwanne ya nwoke, Rosh Bhatti na-azụ. Foto dị n'okpuru ebe a, ọ bụ onye nchịkwa egwuregwu bọọlụ 2.
Nke a bụ Rosh Bhatti. Onye nchịkwa mbụ nke Jamal na England na onye enyemaka nye ezinụlọ ya.
Ndụ na obodo etiti:
Jamal Musiala ekwughị okwu Bekee n'izu mbụ ya na ndị otu ya. Ọ bụ naanị ihe jikọrọ mmekọrịta mmadụ na ibe ya.
Na Central City, ọ zutere, n'etiti ndị ọzọ, nwa nwoke Southampton a na-akpọ Levi Colwill - onye ọ na-ekerịta otu ụbọchị ọmụmụ na onye mechara bụrụ ezigbo enyi ya.
Ndị a bụ ezigbo ndị enyi abụọ - Jamal Musiala na Levi Colwill.
Ị maara? Nwa nwoke a, Colwill, kwuru na ọ bụ kpakpando kachasị nwee amamihe na Central City ruo mgbe Musiala bịarutere.
N'ime ihe dị ka awa ole na ole ya na onye Germany bịara ọhụrụ, Rosh Bhatti ji n'aka na ya enwetala nkà nwa nwoke pụrụ iche.
Dịka ọ nwetara na TSV Lehnerz, Jamal Musiala malitere ịnata otuto sitere n'aka ndị na-ekiri ya.
Nye ọtụtụ ndị maara ya, ọ bụ otu achịcha maka Jamal ka ọ imitateomie aghụghọ nke arụsị ya - nke dị ka Ronaldinho, Thierry Henry, Zidine Zidane na Lionel Messi. Naanị egwuregwu ole na ole na ọtụtụ ihe mgbaru ọsọ, Musiala kwalitere ka ọ nwee ogo ogo ogo.
Pushy na Nna Obi Ike:
Maka Daniel Richard, eziokwu ahụ bụ na nwa ya nwoke so na obere ìgwè (obere ọkọlọtọ ya) dị ka Central Academy, pụtara nchegbu mgbe niile.
Nna m na-achọsi ike ma na-achọsi ike mere ka a mara mmetụta ya n'ihu ọha, na nwa ya ga-aga ebe dị anya ma ọ bụrụ na anabatara ya na klọb buru ibu ma ọ bụghị ya na ndị otu ya. Mgbe ha kwuchara ụdị okwu a, ndị nụrụ ya kwuru;
Kedu ụdị nna ga-ekwu ụdị ihe a?
N'inye echiche ya, Rosh Bhatti kwetara n'ezie na Daniel Richard kwuru eziokwu banyere okwu ya. O mereghachi omume site n'inye papa Jamal Musiala ọchịchọ ya. Ozugbo ahụ, Rosh Bhatti malitere ịkpọtụrụ ndị ọrụ nyocha nke ndị nsọ.
Onye nchịkwa Jamal malitere mkparịta ụka ya na Dick Hayes, onye otu Southampton FC na enyi ya nke ọ na-atụkarị aro ka ụmụaka gbaa bọọlụ - afọ ndị gara aga.
Mgbe ha na-akparịta ụka, e kwere nkwa. Ndị scout (Dick Hayes) kwere nkwa ịbịa egwuregwu ọzọ nke Jamal na Central obodo.
Nnukwu Nnwale nke Mere Ka Akara Aka:
Ọ bụ egwuregwu gbanwere ihe niile maka Jamal Musiala. N'ezie, ohere mbụ ya buru ibu ịbụ akụkụ nke ntorobịa Southampton. N'ikpeazụ, ndị nsọ na - achọgharị - Dick Hayes - mechara hụ egwuregwu Jamal.
N'inye akụkọ banyere egwuregwu bọọlụ n'etiti ndị otu U8 nke Central City (otu otu Jamal) na Pace Pumas, Rosh Bhatti kwuru;
“Ọ gaaraghị aka mma. Jamal gbara goolu isii n'ime nkeji iri. Ọ bụghị naanị nke ahụ, o gosikwara nnukwu mmụọ otu ụbọchị ahụ.
Ahụtụbeghị m nke ahụ na nwata nwoke ọgbọ ya. Ebumnuche Jamal Musiala abụghị naanị inye goolu kama ọ bụ iji nyere onye ọ bụla so na ya bọọlụ goolu. ”
Youmaara?… N'agbanyeghị na ọ na-eme nke ọma na asọmpi ahụ, atụmatụ Jamal arụghị nke ọma (ọ fọrọ nke nta ka ọ zuo oke) dịka ọ rọrọ. N'ụzọ dị mwute, na njedebe, otu n'ime ndị otu ya gafere bọọlụ ka ọ ghara inye goolu.
Ezigbo iwe were Jamal banyere ihe ahụ furu efu - nke gbochiri atụmatụ ịgba bọọlụ zuru oke. Ka o sina dị, ọrụ nwa a mụrụ na Stuttgart bụ ihe na-akpali akpali, na Dick Hayes, bụ onye ọrụ Southampton FC, nwere afọ ojuju karịa.
Jamal Musiala Biography - tozọ Na-ewu ewu Akụkọ:
N'ịgbaso egwuregwu ule na-aga nke ọma, Dick Hayes (mgbe ọkpụkpọ ikpeazụ gasịrị) gbagara ụmụnna Bhatti ozugbo (Jazz na Rosh).
O kwuputara na ya ga-akpọ obere Jamal maka ọzụzụ ọzụzụ n'ime ụlọ nke Southampton.
Otu izu ka e mesịrị, kpọmkwem na November 2010, Musiala chọtara onwe ya n'otu ebe ọzụzụ ọzụzụ otu - ọdịda anyanwụ nke etiti obodo Southampton. Otu n'ime ụmụnne Bhatti, bụ Rosh nọ ya, o kwuru nke a;
“Ha jiri Jamal ozugbo na egwuregwu ule. Oge a, nwatakịrị nwoke dị afọ 7 nwetara ọnụ ọgụgụ abụọ. Egwu. ”
Ozugbo ule ahụ gasịrị, Dick Hayes kwadoro ndị nne na nna Jamal Musiala ka ha na Terry Moore, bụ isi nke ndị ntorobịa Southampton. Cheta, n’oge gara aga ọ na-esiri Carolin na Daniel Richard ike ịhụ nwoke a.
Dabere na Moore, Jamal bụ nwatakịrị kachasị nwee ọgụgụ isi ọ hụtụrụla - ọbụlagodi Theo Walcott na Gareth Bale. O kwusiri ike na ndị Senti aghaghị ime ihe ọ bụla iji banye ya.
Iningbanye na Southampton na Mmetụta:
Mgbe ya na Ndị-nsọ nwechara ule ya, a kwadoro Jamal ka ya na ụmụntakịrị nwoke nwere ike ịsọ mpi na Staplewood (Southampton FC training ground).
Nke a mere mgbe Ndị-nsọ na-akwado ọrụ akwụkwọ ya. Nnyocha gosiri na ha abanyela ya aka - ugbua.
Bọọlụ na-ata nri na ala ọzụzụ nke Southampton kpughere ikike ya nye ọtụtụ ndị na-ege ntị. N'ụzọ dị ịtụnanya, mgbe Jamal Musiala gosipụtara nka ya, ndị na-eme egwuregwu si n'akụkụ ndị ọzọ nke mba ahụ hụrụ.
Ndị na-egwu egwuregwu bọọlụ si na London powerhouse (Chelsea na Arsenal) so na ndị na-ekiri nwata ahụ. Na-enweghị oge dị mkpa iji kwenye onwe ha banyere Jamal, ndị dike abụọ ahụ na-agba bọl na-amalite ngwa ngwa na-eme atụmatụ ịdọrọ Whiz Kid site na ndị nsọ.
North na West London (Arsenal - Chelsea) Agha maka Jamal:
Ụbọchị November 2010 ruo Jenụwarị 2011, bụ akara mmalite nke agha mbufe n'etiti Gunners na Blues - n'aha ịbanye Musiala. T
ogether na n'otu oge ahụ, ma Chelsea na Arsenal rịọrọ nwa nwoke ahụ.
Akwụkwọ ịkpọ oku na Cobham nke Chelsea bịara na Hale End nke Arsenal bịara n'otu oge. Ka agha na-ebufe n'etiti ụlọ abụọ London dị elu na-agbasa ngwa ngwa, Southampton bụ onye nwe Jamal hụrụ ohere. Klọb ahụ enweghịzi mmasị idebe ya, kama nke ahụ, na-enweta uru site na ire ya.
Dị ka ha mere kemgbe ọtụtụ afọ, Southampton na-azụ ahịa dị ka ọ na-adị. Southlọ ọrụ ndịda ndịda nke England kpọrọ onye isi oche ya (onye ọrụ dị ike na klọb), Nicola Cortese, ka o nyere aka ibute mbufe ahụ.
Nke a bụ nwoke na-aga naanị ịfefe ndị okenye agba. Kaosinadị, n'okwu a, o tinyere aka na nkwekọrịta Jamal Musiala.
O juru ọtụtụ ndị anya, Nicola Cortes gbanwere akụkọ na mberede site na ime mgbanwe banyere ire Jamal Musiala na Chelsea ma ọ bụ Arsenal.
N'okpuru ebe a, onye isi oche nke Southampton Football Club ghọrọ onye na-atụgharị uche na ime ka Jamal dị afọ asaa soro ụlọ ọrụ ya.
Zute Nicola Cortes. Nwoke enweghị ike iguzogide Jamal Musiala.
Onye Switzerland a mụrụ na Italy onye maara asụsụ German na Polish gbalịrị ime ka ndị mụrụ Jamal Musiala kwenye. Echiche ya bụ ka ha hụ ihe kpatara ya - ma kwe ka nwa ha nọrọ na Southampton.
Rosh Bhatti, onye sokwa na nzukọ Daniel Richard, Carolin na Nicola Cortes chetara ihe niile mere. N'okwu ya;
Mazi Cortese nwere obi ọmịiko ma kwuo okwu n'okwu ya na ndị nne na nna Jamal Musiala.
O nwere mmasị na nwa ha nwoke ma mesịa kwupụta na ọ ga-ewepụ nkwụsị London. O kwere nkwa ijide Jamal na klọb - na nkwekọrịta ntorobịa ogologo oge.
N'ime obi Rosh Bhatti, onye na-anụ ọkụ n'obi Saints, ọ nwere olile anya ịhụ ka Jamal bịanyere aka na Southampton ogologo oge.
Ihe ịma aka kasịnụ bụ ime ka ndị nne na nna Jamal Musiala kwenye, karịsịa papa ya (Daniel Richard). Mgbe ọ na-akwa arịrị banyere ịnyefe saga, Rosh Bhatti, n'ụbọchị 28 nke Jenụwarị 2011 nyere ihe ndị a na profaịlụ Facebook ya;
Ozi Facebook a sitere n'aka Rosh Bhatti - na 2011 - na - ekwu ya niile.
Chelsea FC meriri ụzọ agha atọ megide Jamal Musiala:
Dabere na nwata nwoke 7, akara aka nke ọdịnihu ya dabere na ihe papa ya na mama ya chere na ọ kachasị mma maka ya. Na Jenụwarị 2011, Carolin na Daniel Richard gara ileta ma nyochaa ma ụlọ ọrụ ọzụzụ Arsenal na Chelsea.
Akụkọ Jamal banyere akụkọ banyere Chelsea meriri n'agha iji banye ya dị ịtụnanya. Ọ nọ ọdụ n'ụgbọ ala nna ya na-ele anya na windo.
Ọ bụ oge oyi (February 2011) ụbọchị ahụ dịkwa ezigbo oyi. N'agbanyeghị nke ahụ, Jamal hụrụ na ọsụsọ na-agba ya n'ihi na ụjọ tụrụ ya.
Nwatakịrị amaghị ihe ga-eme. Na mberede, Nna ya siri na ụlọ nsọ pụta wee meghee ọnụ ụzọ nke ụgbọ ala ya. Nke a bụ Daniel Richard na-agwa nwa ya nwoke;
'Ochioma diri gi bu onye otu n'ime ndi kachasi nma na Premier League - Chelsea FC YOUTH.
Jamal Musiala Biography - Akụkọ banyere Successga nke Ọma:
Mgbe ya na Southampton nọrọ ọnwa anọ, onye na-eto eto na-eto eto na-eto eto mechara sonye na nwata nke Chelsea Football Club.
Ndị Bad nyere ya akwụkwọ. Ọ bụ ihe ịtụnanya ịmara na ọtụtụ ihe ndị a mere n'ime naanị otu afọ mgbe ezinụlọ Jamal Musiala rutere UK site na Germany.
Jamal nwere ahụmahụ magburu onwe ya n'ụbọchị mbụ ya na ọzụzụ ọzụzụ Chelsea na Cobham. Igosipụta ezigbo onyinye ya, ọ dịrị ya mfe ịnweta ndị enyi ọhụrụ.
Jamal dị ezigbo nso na enyi ya ochie bụ Levi Colwill, onye Chelsea wetara site na ndị nsọ.
Nwere ike ịhụ nwa anyị nwoke? Ya na ndị ntorobịa Blues nwere obi ụtọ n'oge ya.
Laa azụ n'oge ahụ, e kwere Jamal na ndị enyi ya obi dị ka obere kpakpando ka ha nọdụ ala n'azụ oche ndị ọkachamara n'oge egwuregwu Premier League na Stamford Bridge.
Ohere a mere ka Jamal soro ndị Legends dị ka Didier Drogba, John Terry na Michael Essien.
Iningbanye na Football:
Ozugbo ọ banyere na ike London (afọ asatọ), nne na nna Jamal Musiala debara aha ya na Whitgift School nke dị na Croydon, London. Echiche nke ịbata ya na ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ a sitere na ndụmọdụ Chelsea FC.
Ị maara?… Ụlọ Akwụkwọ Whitgift abụrụla onye a ma ama maka ịkụzi usoro nke nkà bọọlụ Bekee na-eto eto n'afọ ndị na-adịbeghị anya. Ihe atụ zuru oke bụ Callum Hudson-Odoi na Victor Moses - ụmụ akwụkwọ ha a ma ama.
Na Whitgift, Jamal Musiala gbara bọọlụ ụlọ akwụkwọ na ọganihu ya dị ngwa ngwa. Ọ bịara ka mma mgbe ọ malitere ịga Corpus Christi - ụlọ akwụkwọ ọzọ dị na London. Jamal malitere igwu egwu maka ndị otu Corpus Christi na 2013 site na iji uwe elu Fulham.
N'ime oge a, ndị na-ekiri ole na ole maara na Musiala bụ akụkụ nke Chelsea. Ụlọ akwụkwọ ya jikọtara ya na ụlọ ịgba bọl Fulham na ọ bụ ya mere obere ihe mgbaru ọsọ na-eyikarị uwe elu Fulham na asọmpi Premier League nke ụlọ akwụkwọ.
Nnyocha nwekwara ya na mgbe ụfọdụ Jamal ga-agbanwe gaa na ngwa nke Brentford na AFC Wimbledon. Nke a bụ n'ihi na ụlọ akwụkwọ ya (Corpus Christi) si n'ebe ndịda ọdịda anyanwụ London nọchitere klọb ndị nọ n'ebe ahụ.
Footballlọ Akwụkwọ Nkụzi nke Schoollọ Akwụkwọ:
Ị maara?… N'okpuru nduzi nke onye nkuzi egwuregwu raara onwe ya nye Tony Mesourouni, Musiala zipụrụ ndị otu ụlọ akwụkwọ Corpus Christi ya na ngwụcha nke asọmpi Premier League.
Ihe karịrị ụlọ akwụkwọ 1,000 n'ofe mba ahụ so na asọmpi ahụ ma ọ bụ ya kacha mma.
Zute ọkachamara ọkachamara na ụlọ akwụkwọ.
Jamal Musiala ghọrọ nwoke kpakpando ka ndị otu Corpus Christi ya meriri na asọmpi bọọlụ ụlọ akwụkwọ 2013.
N'ezie, n'etiti 2011 ruo 2014, ndị otu ya meriri asọmpi Junior Premier League atọ. Musiala gụchara dịka onye kacha nye goolu na abụọ n'ime ha.
Musbọchị otuto nke Jamal Musiala School.
Otu n'ime egwuregwu kacha sie ike ọ lụrụ ọgụ bụ ya na ndị otu ụlọ akwụkwọ Liverpool. Jamal nwere egwuregwu ya kacha mma na Anfield na ọ bụ ebe e nyere ya onyinye dị ka nwa nwoke asọmpi ahụ.
Ọ bụrụ na ị maghị… Jordan Henderson na onye gbaburu Liverpool bọọlụ, Dirk Kuyt chịkọtara oge ahụ. N'okpuru ebe a bụ foto nke Jamal na-ese foto na Reds Legends.
Nke a gosiri na ọ bụ otu n'ime ụmụaka kacha mma na mba ahụ. Jamal Musiala were Legends abụọ a were foto.
Nzute onye njikwa England, Gareth Southgate, dịka nwata:
Mgbe Jamal Musiala zụrụ maka Corpus Christi Football League Grand Tournament, ọ (na 2013) nwere ohere izute VIP.
Onye ahụ bụ Gareth Southgate - nwoke mechara bụrụ onye nkuzi otu egwuregwu bọọlụ England.
N'ụbọchị a, obere amata na njedebe ha ga-eme ka ha bụrụ ndị na-asọpụrụ mba - German International na onye nchịkwa England.
Jamal Musiala zutere Gareth Southgate dị ka nwatakịrị.
Jamal emeela nnukwu mmeri mgbe ọ rutere n'ụlọ akwụkwọ Corpus Christi n'afọ ikpeazụ ya. N'ịbụ onye na-enweghị mmeri n'asọmpi ụlọ akwụkwọ, ọ gbasoro akụkọ ọdịnala iji nweta nnukwu nsọpụrụ.
Otu ụbọchị, n'oge a na-eduzi njem na Wembley Stadium, Jamal kpaliri onye nkụzi PE ya - onye kwuru otu oge;
Ọ dị njikere mgbe niile ịjụ ajụjụ banyere ndị egwuregwu bọọlụ gbatụrụ okpu na Wembley. Nke ahụ mere tupu otu nnukwu egwuregwu ama egwuregwu.
Jamal gwara m na ọ ga - agbata okpu na - ejikwa ihe mgbaru ọsọ anọ na Wembley.
Chelsealọ akwụkwọ Chelsea na-ebili:
Chelsea nọgidere bụrụ naanị klọb Jamal na-egwuri egwu na England na-abụghị ụbọchị akwụkwọ ya.
N'oge ọ nọrọ ụlọ akwụkwọ mmuta, nwa Whiz nwere mmekọrịta dị mma na onye nchịkwa ya, James Simmonds, bụ onye kwere ka ọ tozuo ma n'egwuregwu na usoro.
Bambi nwere ike ịgụ egwuregwu ahụ nke ọma - n'isi. Lad nwere onyinye nke ukwuu na -eme ka dribbles dị ebube na mmegharị dị mma na oghere siri ike - dị ka a hụrụ n'okpuru.
Jamal Musiala bụ nwata kacha mma na Chelsea - n'oge ya.
Nke ka mkpa bụ na ọ nwere ịdị jụụ n'ihu ebumnuche onye iro - ihe mere ka ọ ghara igbochi ya site na afọ agụmakwụkwọ ya. Nkwenye dị otú ahụ dugara ndị otu ya nnukwu mmeri.
N'ihi obi ike ya, nwa anyị nwoke nwetara ihe nrite mara mma. Ị chọpụtala na ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu ihe nrite ahụ ọ meriri na Fulda? Nke ka nke, obi ike ya mekwara ka mba mara ya.
Onyinye Jamal Musiala na Chelsea Academy.
Mgbe ọ dị afọ 15, Jamal ka nwere oge buru ibu iji kpebie mba ọ ga-aga n'ihu na-egwu.
N'oge oge agụmakwụkwọ Chelsea nke ndụ ya, o lekwasịrị anya n'ụzọ zuru ezu n'ịgba ndị otu mba England na-eto eto ebe ọ na-eme nke ọma na agba agba.
Ihe ịga nke ọma nke ntorobịa Jamal nyere ya obere oku England.
N'ịbịaru ngụsị akwụkwọ nke ụlọ akwụkwọ, Jamal malitere ịhapụ ọtụtụ ndụ nke aka ya. N'ebe ndị ọzọ iji kwadebe ya, papa ya (Daniel Richard) kwadoro ya ka ya na ezinụlọ ndị ọbịa na Chelsea nọrọ n'abalị - n'akụkụ ala ọzụzụ.
Ibi na nso Cobham mere ka o jikwaa oru ya na ntinye akwukwo. Dị ka a tụrụ anya ya Jamal Musiala gafere ule ya GCSE, ihe ngosi nke mere ka agụmakwụkwọ ya kwụsị.
Mgbe ọ gụsịrị akwụkwọ bịara na-elekwasị anya na football. N'ime oge a, onye na-egwu egwuregwu nwere obi ike na ọ ga-eme ka ọ bụrụ ọkwa ọkachamara.
Gịnị kpatara Jamal Musiala ji hapụ England na Chelsea?
N'ụzọ dị mwute, nrọ nke igwu egwu na Stamford Bridge aghọghị eziokwu. Mkpebi a mere n'ihi ihe onwe onye.
Ọ bụrụ na ị maghị, echiche UK banyere BREXIT ghọrọ ihe mere ezinụlọ Jamal Musiala ji laghachi na Germany.
Ọ dị mma ịmara na n'oge ahụ, onye nchịkwa Chelsea FC na Akụkọ Mgbe Ochie Frank Lampard, echeghị na Jamal ịbụ akụkụ nke atụmatụ otu ndị okenye ya - ọzọ na TheSun.
N'ịbụ ndị nwere ohere dị nta na ụlọ ọgbakọ U18, kpakpando na-ebili jụrụ ịnakwere nkwekọrịta Blues ogologo oge n'oge okpomọkụ nke 2019. Tupu ọ pụọ, Chelsea FC furu efu kpakpando - na onye nke Michael olise. Klọb ahụ agbagharala inwe Harvey Elliott.
Olee otu FC Bayern Munich hụrụ Jamal Musiala:
Onye nnukwu egwuregwu bọọlụ German na-achọ ịlụ otu Chelsea, Callum Hudson-Odoi na 2019 mgbe ha mụtara banyere nwa Carolin na Daniel Richard.
Mgbe ha na-akparịta ụka na-akparịta ụka, nwanne Callum Hudson Odoi bụ Bradley kpọrọ aha Jamal Musiala ọtụtụ ugboro. Nke ahụ mere ka ndị ọrụ Bayern chee echiche.
N'ịtụle ya na mkparịta ụka ya mere nchọpụta ụlọ ọrụ German onye Musiala bụ. Ọzọkwa, ma ọ dị mma ka Bradley kwuru. Mgbe achọpụtara ya, Bayern malitere ịmanye onye nkuzi Chelsea Frank Lampard ka ọ hapụ nwata ahụ ka ọ laa.
Nke na-adọrọ mmasị karị, ụlọ ike German chọpụtara na Musiala na ezinụlọ ya akwadowo ha kemgbe ọ bụ nwata - ma eleghị anya, ma e wezụga na nke ahụ May 2012 UEFA Champions League ikpeazụ megide Chelsea FC.
Lee na July 2019 (mgbe ọ dị afọ 16), Musiala soro ihe ndị masịrị ya Jadon Sancho na Jud Bellingham ịmalite ọrụ na Bundesliga.
Ọ bụ nnukwu ihe mgbu nye Chelsea FC - onye dịka ọ na-ata ahụhụ n'oge a site na mmachibido iwu. Na Bayern, Kingsley Coman ghọrọ ezigbo enyi ya.
Dị ka a tụrụ anya, ọganihu Jamal bulitere ebe ọ kwụsịrị na Chelsea. Mgbe ọ banyere na Bayern U17, onye nkuzi aha ya bụ Miroslav Klose zụrụ ya - nwoke kwadebere ya maka otu ndị otu egwuregwu.
The Bayern Munich Debut na Teammates nghọta:
N'ụbọchị a gọziri agọzi, a kpọrọ ya ka ya na ndị okenye Bayern gaa ọzụzụ. N'oge a égbè na-agafe ọzụzụ na Robert Lewandowski, Onye isi na-ahụ maka egwuregwu Bayern Marco Neppe na onye nduzi egwuregwu Hasan Salihamidzic lere anya.
N'ịbụ ndị nwere mmasị na nkà Bekee na-eto eto, ha pịa bọtịnụ ozugbo ka Musiala nwee mpụta mbụ ya.
Ụbọchị ahụ agaghị echefu echefu bịara na 20th nke June 2020, ihe na-erughị otu afọ ọ bịarutere Munich.
Ngwa ngwa ngwa rue ụbọchị 18 nke Septemba 2020, Jamal nwetara goolu mbụ ya na Bundesliga na mmeri asatọ 8-0 meriri Schalke. Ejiri Musiala dochie ya Thomas Muller na nkeji 88 nke egwuregwu Bundesliga megide Freiburg. N'olu Lehmann.
“Ha! Enweghị m ike ikwere na ya, ”
Lehmann chịrị ọchị na igwe okwu mgbe Jamal Musiala nwetara obere nkeji Hansi Dieter-kpatụ aka gaa kpọbatara ya dị ka onye nnọchi. Lee, vidiyo nke ihe mgbaru ọsọ mbụ ya maka Bayern.
N'ụbọchị ahụ, Bayern Munich chọpụtara na ha nwere diamond dị egwu n'aka ha. N'ikwu okwu banyere ahụmịhe nke ịkụ ihe mgbaru ọsọ ọkachamara mbụ ya, onye Nigeria a mụrụ na German kwuru ihe ndị a;
Akara maka ndị Bavarians nwetara Jamal Musiala nsọpụrụ nke ịbụ onye ọkpụkpọ kacha nta (afọ 17 na ụbọchị 115) na-egwu egwuregwu Bayern na Bundesliga.
Onye na-eme egwuregwu mebiri ndekọ mbụ nke Roque Santa Cruz, gbara afọ 18 afọ 12 ụbọchị.
Ihe mere Jamal Musiala ji hapụ England gawa Germany:
Kemgbe ụbọchị Playmaker nwetara ihe mgbaru ọsọ mbụ ya maka Bayern, onye ọ bụla n'ime ndị otu ya (ọkachasị Joshua Kimmich na Manuel Neuer) malitere iji abụ too aha ya. Abụọ ndị a mere ka o doo anya na Jamal bụ akụkụ dị mkpa nke otu ha.
Na-eso nkwanye ugwu, ndị otu egwuregwu ama ama - ọkacha mmasị nke Serge Gnabry, Leroy Sane, Leon Goretzka guzobere echiche nke ime ka Jamal kwenye na England pụọ na Germany. Mgbalị siri ike nke kpakpando ndị a mere ka Jamal malite ịmalite echiche nke mgbanwe.
Okwu ire ụtọ:
Ebe ezinụlọ Jamal Musiala na-ahapụ UK n'ihi BREXIT, ọchịchọ nke ịghara igwu egwu England pụtara ìhè.
N'oge a, Joachim Löw malitere ịhụ ihe kpatara ohi onye na-egwu egwuregwu ahụ. Omume German mere ka esemokwu dị n'etiti Low na Southgate.
Nnyocha nwere ya Joachim Löw n'onwe ya gara n'ụlọ ndị nne na nna Jamal Musiala, Na-agwa ha okwu na ha ga-enwe nwa ha nwoke maka Germany.
N'ihi mgbalị ndị ọzọ na-eme ka mmadụ kwenye, Musiala (tupu ọ gbaa afọ iri na asatọ) mere mkpebi ịbanye na Germany.
Mgbe o mebisịrị obi nke Gareth Southgate na ndị na-asụ Bekee, Jamal kwesịrị ịpụta maka ikwu mkpebi ịhapụ England. Onye na-etiti, gbara ya ajụjụ ọnụ GOAL na Spox, kwuru;
“Ihe a abụghịrịrị m mkpebi dị mfe. Enwere m obi maka Germany na obi ọzọ maka England.
Obi abụọ a ga na-eti mba abụọ ebighebi.
N'ikpeazụ, naanị m na-ege ntị na mmetụta m. Ọ na-agwa m na ọ bụ mkpebi ziri ezi igwu egwu maka Germany, mba a mụrụ m.
N'ịbụ ọ theụ nke ezinụlọ ya, Jamal (na March 2021) n'akụkụ nnukwu talent - Florian Wirtz natara oku mbu ha na ndi okenye - maka ndi n’egbo n’egwuregwu 2022 FIFA World Cup.
Ọ bụ naanị oge tupu anyị ahụ ya ka ya na ụfọdụ ndị kacha mma n’ụwa nọ na-ete aka. Ndị ọzọ, dị ka Lifebogger si kwuo, nke Jamal Musiala's Biography, ga-abụ akụkọ mgbe niile.
Jamal Musiala Lifehụnanya Ndụ - Nwanyị, Nwunye, Nwa?
Chụso ọrụ ọkachamara na football adịghị mfe. N'ihi na egwuregwu ahụ bụ nke na-enweghị mgbaghara, ọtụtụ ndị na-eto eto (n'oge na-adịghị anya) na-ahapụ ndụ nke onwe ha.
Nke a pụtara na enweghi enyi nwanyị, nwunye ma ọ bụ nwatakịrị - niile na aha football football. Ezigbo ihe atụ bụ nwa anyị nwoke - Jamal Musiala.
Na-ekpe ikpe site na ọdịdị ihu ya na ụdị egwuregwu ya, ọ dịghị agọnahụ eziokwu ahụ bụ na Dude mara mma dị ka Jamal agaghị anọ na ndepụta nke ndị enyi nwanyị na nwunye.
N'oge a, anyị ekpebiela ịtụba ụgbụ anyị na Weebụ Wide World iji chọọ enyi nwanyị ma ọ bụ nwunye Jamal Musiala ka ọ bụrụ. Ị nwere ike ịhụ rịzọlt a ka wụchara ụgbụ Jamal?
Ajụjụ banyere enyi nwanyị Jamal Musiala.
Mgbe ọtụtụ awa nyochachara kpụ ọkụ n'ọnụ, ndị otu anyị ghọtara na onye ọkpọ egwuregwu na-awakpo emeghị ka ndụ ịhụnanya ya bụrụ ọha - n'oge edere akụkọ ndụ ya.
O yikarịrị ka ọ ga-abụrịrị na ezinụlọ ya dụrụ ya ọdụ ka ọ ghara ịlụ di ma ọ bụ nwunye - karịsịa n'oge a dị mkpa nke ọrụ ya.
Jamal Musiala Ndụ Nke Onwe:
Matata ụdị onye ọ bụ na-abụghị ọrụ ya ga-enyere gị aka ịmatakwu onye ọ bụ. N'oge a, anyị na-ajụ… isnye bụ Jamal Musiala? - pụọ na ihe gbasara football.
Jamal Musiala Ndụ Nke Onwe - AK EXKỌ.
Ihe mbụ bụ na ọ bụ onye dị umeala n’obi ma nwee obi ike. German-Englishman bụ onye zuru oke na ala ekele maka nzụlite nke nne na nna ya.
N'ikwu ya n'ụzọ dị mfe, Jamal Musiala bụ ihe atụ zuru oke nke nwa nwoke bara ọgaranya nke bi n'okpuru ego ya.
Ndụ Jamal Musiala:
Dabere na blọọgụ German Bild a ma ama, nnukwu talent - dịka nke 2021- enyeghị ikike ibi ndụ nke ọma.
Jamal Musiala na-adabere na papa ya iji jikwaa ọrụ ya mgbe nne ya na-akpọrọ ya ọzụzụ kwa ụbọchị n'ime ụgbọ ala ya.
Ajuju banyere ụgbọ ala Jamal Musiala.
Ndị egwuregwu bọọlụ German-English nwere àgwà mgbochi flash. N'ihi ya, ọ dịghị ihe ọ bụla dị ka ụdị ndụ mara mma nke ụgbọ ala ọkụ ọkụ, nnukwu ụlọ (ụlọ) na akara ndị ọzọ nke akụ na ụba na-ahụ ngwa ngwa.
Imata etu esi ebi ndụ Jamal Musiala.
Onweghi ihe puru iche dika ulo n’egwuregwu bọọlụ ebe ibi ndu ndi otu nile gbadoro anya na ogha n’ihu nke onye n’enye ha.
Ndị a bụ Musialas. Akụkụ nke akụkọ ndụ anyị na-akọ akụkọ ndị ọzọ pụrụ iche gbasara ndị ezinụlọ ya na-amalite site na nne na nna ya.
Banyere Jamal Musiala Nna:
Daniel Richard, nke a na-akpọ "Rich" bụbu onye na-agba ọsọ na Naịjirịa. Ọ na-egwuri egwu n'ogo kachasị elu nke mba ahụ (Nigeria Professional Football League) tupu ọ kwaga United Kingdom na Germany.
Dị nnọọ ka ọtụtụ ndị nna na-emeghị onwe ha aha n'egwuregwu, ọ na-esiri Rich ike ịkwụnye akpụkpọ ụkwụ ya. Ọzọkwa, na-emeso ọrụ ya na-enweghị ihe ịga nke ọma.
Ebe ọ bụ na ọ laghachiri na football, nna nke atọ kwere nkwa iji hụ na nwa ya nwoke ọ hụrụ n'anya (Jamal) na-ebi nrọ ya.
Daniel Richard bụ nwaafọ Nigeria site na mbido na isi.
N'ihe ndekọ nke onwe gị, Daniel Richard bụ nna na-eme ihe ike, na-achọsi ike ma na-achọsi ike. Ọ bụ onye nchịkwa onwe ya - nke raara onwe ya nye nwa ya nwoke ma na-eme nzuzu banyere ọganihu football ya. Dabere na Branko Milenkovski, onye nkuzi Jamal na Lehnerz;
Amaara m ọgaranya dị ka onye na-eme nzuzu banyere nwa ya nwoke.
Nwoke ahụ na-agbago mgbe ọ na-agbadata akara aka iji nwee obi ụtọ Jamal. Mgbe ọtụtụ egwuregwu gasịrị, Daniel Richard na-agba ọsụsọ karịa nwa ya nwoke.
Gba ọsọ na ịgbada akara ga-akwụsị ọrụ ndị ọrụ oge ụfọdụ. N'ihi nke a, a ga - enye Daniel Richard iwu ma dọọ ya aka ntị oge ụfọdụ ka ọ pụọ n'ọhịa. Lee nna!
Banyere Jamal Musiala Nne:
Zute Carolin - Super Mama.
Mgbe papa ya gbagoro ma gbadata olulu ahụ, Carolin nwunye ya ga-ahọrọ ịnọ nwayọ n'akụkụ akụkụ nke ndị na-ege ntị, na-ahọrọ ile obere nwa ya nwoke egwu. N'oge na nke ọ bụla nwa ya nwoke na-egwu, ọ ga-ese foto maka album ezinụlọ.
Banyere ọrụ ya, Carolin Musiala bụ ọkachamara na mpaghara iji Sociology na Marketing. Ọ mụtara nke ahụ site na agụmakwụkwọ mahadum ya.
N'oge ezinụlọ ya nọrọ na London, Carolin rụrụ ọrụ dị ka onye isi ahịa maka ụlọ ọrụ sayensị ndụ America. Ọfịs ya dị na ọdịda anyanwụ nke Surrey na Farnham, na-adịghị anya site na ebe ọzụzụ Chelsea.
Musmụnne Jamal Musiala:
Ezinụlọ nile nke nuklia nwere mmadụ ise. N'ịbụ onye na-enyere Jamal na ndị mụrụ ya aka, enwere ụmụnne abụọ ọzọ - nwanne nwanyị, Latisha na nwanne nwoke, Jerrell Musiala (nke ọdụdụ na ezinụlọ). Enwere obere akwụkwọ banyere nwata nke Carolin na Rich.
Otu ihe gbasara nwanne nwanne Jamal Musiala (Latisha) bụ eziokwu na ọ bụ nnukwu onye ofufe Bayern Munich. Ọ kwadoro ụlọ ọrụ ahụ kemgbe ọ bụ nwata - tupu nwanne ya nwoke esonye ha.
Mgbe ọ na-egosi mkpebi ya ịbanye na Bayern, Jamal kpughere na ọ bụ obere n'ihi ịhụnanya nwanne ya nwanyị nwere maka onye Bundesliga. O kwukwara na Latisha na-eyi okpu Bayern mgbe niile ọ nyere ya onyinye kemgbe 2016.
Dịka eziokwu a kwadoro, ndị ama ama ama ama nwere ndị otu ọbara ya na West Africa. Anyị na-ekwu nke a na-achọpụta na papa ya bụ onye agbụrụ Nigeria. N'ikwu nke a, o doro anya na site na nne nne ya, ndị ikwu kwesịrị ịdị na Poland.
Eziokwu Jamal Musiala:
Mgbe anyị gafere Bio ya, anyị ga-eji ngalaba mmechi a kpughee eziokwu ndị ọzọ gbasara ndị German bọọlụ ndị Britain, Polish na ndị Nigeria.
Eziokwu # 1 - A machibidoro iwu site na Cheering Goals:
Ná mmalite nke ọrụ ntorobịa ya, Jamal Musiala malitere àgwà nke ime ememe mgbe niile - ọbụlagodi mgbe onye iro ya meriri.
Laa azụ n'oge ahụ, o bu n'uche n'ụzọ na-ezighị ezi - na ọ bụrụ na e meriri ihe mgbaru ọsọ (n'agbanyeghị otu ọ bụla), ọ ga-enwe obi ụtọ.
Dị ka ọ megidere iwu football, TSV Lehnerz (osisi mbụ ya) aghaghị ime ihe. Ndị nlekọta nke ụlọ akwụkwọ ahụ gwara onye nchịkwa Jamal (Milenkovski) na otu n'ime ọrụ ya bụ isi bụ ịkwụsị ya mgbe ọ na-enwe obi ụtọ maka ihe mgbaru ọsọ ndị otu mmegide meriri. Dị ka onye nchịkwa si kwuo;
Enwere m ike icheta mmeghachi omume ahụ Rich nwere mgbe nwa ya nwoke na onye na-emegide ya na-eme ememe.
Nke mbu, papa Jamal Musiala tukwasiri aka ya elu site na ujo ma chia isi ya ochi. ”
Eziokwu # 2 - N'iji ụgwọ ọnwa ya na Nkezi Citizen:
Ebe ọ bụ na ị malitere ile Jamal Musiala'Bio, nke a bụ ihe ọ kpatara.
Kwa Afọ: € 364,560
Kwa ọnwa; € 30,380
Kwa Izu: € 7,000
Kwa :bọchị: € 1,000
Oge Awa ọ bụla: € 41
Nkeji ọ bụla: € 0.69
Sekọnd ọ bụla: € 0.01
Ebe o si bia na nwa amaala German ga-arụ ọrụ maka afọ 8.5 - iji nweta ya FC Bayern Munich ụgwọ ọnwa kwa afọ.
Eziokwu # 3 - Jamal Musiala Profaịlụ:
Onye na-egwu egwu a bụ onye kachasị mma ịnwe na otu gị ma ị na-achọ ịbanye akara ọhụụ ma ọ bụ nweta uru.
Jamal Musiala FIFA nwere ike na naanị afọ 17 na-ekpughe otu eziokwu. Na ọ ga-asọ mpi n'ọtụtụ kacha mma n'ụwa na-abịa.
Maka ndị hụrụ ụdị ọrụ FIFA n'anya, ile anya mmezi mmepe nke Jamal Musiala ga-enye gị echiche banyere ọdịnihu ya na afọ ndị na-abịa. Lelee vidiyo nke ule na-eto eto na-awakpo onye na-egwu egwu.
Eziokwu # 4 - Jamal Musiala Religion:
Onye na-agba bọọlụ enyebeghị ozi gbasara nkwenye n'ihu ọha. Enweghị ihe akaebe ọzọ nke okwukwe ya, naanị anyị nwere ike iwere okpukpe ọ na-eso.
Ikpe ikpe site na aha ha - Daniel Richard na Carolin, ọ ga-abụ na okpukpe nke ndị nne na nna Jamal Musiala na-atụkwu aka na Iso Christianityzọ Kraịst.
Kaosinadị, aha ahụ bụ 'Jamal' bụ aha ndị Arab bụ onye Kraịst bụ nwoke. Ọ bụrụ na ịmaghị, ndị Kraịst na ndị Alakụba na-akpọkarị aha a ọtụtụ mba Alakụba.
Ọ ga-ekwe omume nke ukwuu, nne na nna ya nyere ya aha [Jamal] iji sọpụrụ ezinaụlọ - naanị ma eleghị anya - otu n'ime nne na nna ya ochie nke Poland si n'akụkụ nne ya. Onye a nwere ike ịbụ onye Alakụba.
Eziokwu # 5 - Banyere Jamal Musiala aha otutu:
N'oge ahụ ọ sonyere na Bayern, Leroy Sane ji ịhụnanya nye nwata ahụ aha abụọ aha otutu. Enwere; "Bambi" na "onye oru".
Nicknames bịara n'ihi omume Jamal Musiala nke ịmekwu ọzụzụ na ụlọ dị arọ na Sabener Strasse - FC Bayern Munich ọzụzụ.
Jamal Musiala Biography Nchịkọta:
Jiri nwayọ jiri Tebụl Wiki a nweta njem nlegharị anya ngwa ngwa nke Memoir Bambi.
Aha n'uju: Jamal Musiala
Aha otutu: Bambi na Onye oru
Ụbọchị ọmụmụ: Thbọchị 26 nke Mach 2003
Age: Afọ 19 na ọnwa 2
Ebe amụrụ onye: Stuttgart, Germany
Nationality: (Bekee) England na (German) Germany
Ndị nne na nna: Carolin Musiala (Nne) na Daniel Richard (Nna)
Ụmụnne: Latisha Musiala (Nwanne Nwaanyị) na Jerrell Musiala (Ntoro Nta)
Mmalite ezinụlọ / mgbọrọgwụ: Nigeria, Poland, England na Germany
Ọrụ Nna: Nchịkwa Onwe na Onye Nnọchiteanya.
Ọrụ Mama: Ahịa (iji Sociology)
Networth: 1.5 Nde Euro (2021)
elu: 5 ụkwụ 11 sentimita (1.80 mita)
Ọnọdụ egwuregwu: Na-awakpo etiti
Onye nnọchite anya: 11 merie GmbH
N'ime oge a na-ede Biography nke Jamal Musiala, anyị ghọtara na ndị na-agba ọsọ ụkwụ nwere nne na nna nwere nnukwu mkpali ma kpebisie ike ịhụ ka ọ na-aga nke ọma. Taa, ezinụlọ dum na-enweta mkpụrụ nke ọrụ ike ha.
N’enweghi obi abụọ, ma Carolin Musiala na Daniel Richard emeela obi. Ọ bụrụ na ị ga-echeta, n’oge ahụ o chere ihe ịma aka ihu (n’oge ọ ka bụ nwata na UK), obi nna nna ya nyere onwe ya ịchọ ịchọ azịza ya.
Inwe akara ukwu nke onye ọgba bọọlụ na-aga nke ọma n'ime ezinụlọ bụ ihe Latisha na Jerrell (nwanne nwanne Jamal Musiala na nwanne) chọrọ. O yikarịrị ka onye ọ bụla n'ime ezinụlọ ga-agbaso nzọụkwụ ya.
Anyị na-ekele gị maka iwepụta oge anyị soro anyị na njem a na-akpali mmasị nke Memoir anyị. Ndị otu anyị na Lifebogger na-eche banyere ịkwụwa aka ọtọ na izi ezi nke isiokwu anyị gbasara England na Ndị egwuregwu bọọlụ ndị German.
Jiri nwayọ rute anyị aka - ọ bụrụ na ị hụ ihe ọ bụla na-adịghị mma na Jamal Musiala's Bio. Ma ọ bụghị ya, jiri ngalaba nkọwa iji kesaa echiche gị banyere onye midfielder nke German bụ onye nwere nne na nna nke ezinụlọ Polish, Britain na Nigeria.